APPLE က ID ကို CONFIGURE လုပ်နည်း - APPLE က ID ကို - 2019
အဓိက Apple က ID ကို
ကျနော်တို့က Apple ID ကိုဖွင့်လှစ်
BIOS ကိုစနစ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအစီအစဉ်များအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၏မှန်ကန်သောအပြန်အလှန်များအတွက်ဝတ်ပြုကြလော့။ BIOS ကို၏ဗားရှင်းပစ္စည်းကိရိယာများကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေသည်ဘယ်လိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခါအားလျော်စွာ Motherboard က developer များပြဿနာများကိုဆုံးသို့မဟုတ်တီထွင်မှုဖြည့်စွက်, updates များကိုလွှတ်ပေးရန်။ နောက်တစ်ခုကျွန်တော် Lenovo ကလက်တော့ပ်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် BIOS ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ Lenovo ကမှတ်စုစာအုပ်အပေါ် BIOS ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
ကုမ္ပဏီ Lenovo က update ကိုထံမှလုနီးပါးအားလုံးလက်ရှိလက်တော့မော်ဒယ်များညီတူညီမျှတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သမားရိုးကျ, တစ်ခုလုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်သုံးဆင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ဒီနေ့တစ်ဦးချင်းစီအရေးယူမှာအသေးစိတ်ကြည့်ရှိသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်အစမပြုမီ, သေချာလက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာကောင်းတစ်ဦးပါဝါအရင်းအမြစ်ချိတ်ဆက်, နှင့်၎င်း၏ဘက်ထရီအပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆိုကြောင်းပါစေ။ မဆိုပင်အနည်းငယ်ဗို့အားပွောငျးခွငျးတပ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများကာလအတွင်းမအောင်မြင်မှုများကိုနှိုးဆော်ခြင်းနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် 1: အဘိတ်
Learn-to-date ဖြစ်အောင်သင့်ရဲ့, BIOS ၏ဗားရှင်းတရားဝင် website တွင်အရာအားဖြင့်ကနှိုင်းယှဉ်ဖို့။ အဆိုပါပြဌာန်းခွင့်တို့အတွက်တော်တော်များများနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ အောက်ကလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ကတခြားဆောင်းပါးဖတ်သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တပ်ဖြန်။
Read more: ကျနော်တို့ BIOS ကိုဗားရှင်းသင်ယူ
အခြားမည်သည့် antivirus ကိုနှင့်လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ကျနော်တို့အရာရှိတဦးကရင်းမြစ်များမှသာဖိုင်တွေကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဟာ operating system ကိုသို့ရရှိသွားတဲ့ကြောင့်ကြောက်လန့်ဖြစ်ပါဘူး။ သို့သော် antivirus ကိုအဆင့်မြှင့်ကာလအတွင်းအချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များတုံ့ပွနျနိုငျသညျ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးအနေဖြင့်ထိုသို့ပိတ်ရန်အကြံပြုသည်။ အောက်ပါ link ကိုပစ္စည်းမှာလူကြိုက်များတဲ့ antivirus ကိုအစီအစဉ်များ၏ Deactivate ထုတ်စစ်ဆေး:
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: Disable လုပ်ထား antivirus ကို
ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။ developer များအစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ယခုဤ laptop ကိုအဆင့်မြှင့်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ကြသည်ပရိုဂရမ်ကို run ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဖြစ်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 2: update ကိုအစီအစဉ်ကို Download လုပ်ပါ
ယခုကြှနျုပျတို့မွမ်းမံတိုက်ရိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ ပထမဦးစွာသင်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ Lenovo ကနေအထူးအရန် software များအားလုံးကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုထုတ်ဆောင်သွားကြ၏။ သင်သည်တတ်နိုင်သူတို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Download:
အဆိုပါ Lenovo ကထောက်ခံမှုစာမျက်နှာကိုသွားပါ
မဆိုအဆင်ပြေ browser ကိုအထက်သို့မဟုတ်မှတဆင့်အဆိုပါ link ကို, အ Lenovo ကထောက်ခံမှုစာမျက်နှာကိုသွားပါ။
ရှိရာအပိုင်းကိုရှာဖွေ, အနည်းငယ်ဆင်းစက်စက်ကျ "ယာဉ်မောင်းများနှင့် Software များ"။ ထို့နောက် button ကို click "ဒေါင်းလုဒ်ရယူလိုက်ပါ".
အဆိုပါပြသ prompt မှာ, သင့် Laptop ကိုမော်ဒယ်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ သင်ကမသိလျှင်, နောက်ကျောအဖုံးပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသောတံဆိပ်ကိုရှာပါ။ ကဖျက်ပစ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကမ္ပည်းထွက်အောင်မနိုင်လျှင်, ကိရိယာနှင့် ပတ်သက်. အခြေခံအချက်အလက်ကိုလေ့လာသင်ယူရန်ကူညီသောအထူးအစီအစဉ်များကိုတဦးကိုအသုံးပြုပါ။ အောက်ကလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ကအခြားဆောင်းပါးထဲမှာဒီဆော့ဗ်ဝဲရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်များရှာဖွေပါ။
သင်ကထုတ်ကုန်ထောက်ခံမှုစာမျက်နှာသို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသေချာ parameter သည်ကြောင်းအောင် "Operating System ကို" သူကမှန်မှန်ကန်ကန်မရွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ က operating system ကိုသင့်ရဲ့ဗားရှင်းမကိုက်ညီလျှင်, တပ်မက်လိုချင်သောပစ္စည်းကိုမှလာမယ့် box ကိုစစ်ဆေးပါ။
အဆိုပါယာဉ်မောင်းသူများထဲတွင်နှင့်ပုဒ်မစာရင်းကိုရှာ "BIOS ကို" ထိုသို့ဖွင့်လှစ်စေပေါ်မှာကလစ်လုပ်ပါ။
နောက်တကြိမ်, အမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုအဆိုပါ BIOS ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း"ရရှိနိုင်သောဗားရှင်းအပေါငျးတို့သကြည့်ရှုရန်။
ဒေါင်းလုဒ်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနှင့် installer ကို run ။
နောက်ထပ်အရေးယူသည့်စီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်အောက်မှာလုပ် သာ. ကောင်း၏-up, Start, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အလွန်အမင်းကြောင့်ပရိုဖိုင်းနဲ့ log ရန်သင့်အားအကြံပြု, သာထို့နောက်နောက်တဆင့်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
Windows တွင်က "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး" အကောင့်ကိုသုံးပါ
Windows7အသုံးပြုသူတစ်အကောင့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
အဆင့် 3: တက် Set နှင့်တပ်ဆင်ခြင်း
အခုတော့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်ကိုအလိုအလျောက် BIOS ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုအဆိုပါအရာရှိက tool ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါပွီ။ သင်တို့သည်လည်းသာအားလုံး parameters များကိုမှန်ကန်သောဖြစ်ကြပြီး, တကယ်တော့, ဖိုင်ကို installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူ့ဟာသူအလုပ်လုပ်သောသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်:
ညွှန်မှတ်ကို check လုပ်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ "သာက Flash BIOS ကို" နှင့်အသစ်သောဖိုင်သတ်မှတ်ချက်စနစ် partition ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Flash ကို".
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ Laptop ကို reboot နှင့် BIOS ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ, BIOS ဝင်ရောက်ဖို့ဘယ်လို
Lenovo ကလက်တော့ပေါ်မှ BIOS ကိုဝင်ဘို့အ Options ကို
tab ကို "Exit ကို" အမှတ် Find "Load Setup ကိုပုံမှန်" နှင့်အတည်ပြုပါ။ ဒါကြောင့်သင်က BIOS ကို၏အခြေခံ settings ကို load ။
သင် laptop ကိုပြန်လည်စတင်ရန်သည်အထိစောင့်ပါ။ ဒီမွမ်းမံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုက်ညီဖို့ရှိပါတယ်အပေါငျးတို့သ setting များကိုထားရန်ပြန် BIOS ကိုသို့သွားနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုအောက်ပါလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့စာရေးဆရာများ၏အခြားကနေဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး:
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် BIOS ကို Configuring
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, BIOS ကို၏ဗားရှင်းအသစ်ကို install အကြောင်းကိုရှုပ်ထွေးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရွေးချယ်ထား parameters တွေကိုများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုရန်နှင့်ရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုသူ့ဟာသူအချိန်အများကြီးမယူပါဘူး, ပင်အထူးအသိပညာသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများ၏ကျွမ်းကျင်မှုစရာမလိုဘဲသူတို့နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ငါဘယ်လို ASUS ကလက်တော့ပေါ်မှ BIOS ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါဘူး, HP က, Acer က
ဗီဒီယို Watch: Tsiyon Report - 2017 (နိုဝင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © Apple က ID ကို 2019